Fiteny anglisy - Howling Pixel
Fiteny avy amin'ny fiteny anglisy
Ny abidy ara-drafipeo iraisam-pirenena hafohezina hoe API (Alphabet Phonétique International) amin'ny fiteny frantsay, na IPA (International Phonetic Alphabet) amin'ny fiteny anglisy, dia abidy ampiasaina ho an'ny fanoratana ny feon'ny fiteny tetenina. Izy io dia tsy ohatra ny fomba fanoratana an'ny vondrom-piteny, ny AAI dia abidy natao mba handrakotra ny ankapoben'ny fiteny rehetra. Navelatry ny mpandinika rafi-peo frantsay sy britanika ho an'ny Fikambanana ara-drafipeo iraisam-pirenena, navoaka tamin'ny 1888 izy. Natao tamin'ny 2005 ny famerenana farany.
I Amerika Avaratra dia zana-kaontinanta na kaontinanta iray araka ny fomba fijery. Ny atao hoe Amerika Avaratra dia fikambanan'ny firenena telo: i Etazonia, i Kanada ary i Meksika, na dia sokajiana ao amin'i Amerika Afovoany aza i Meksika aoamin'ny bokin-jeografia somary efa taloha.
Ny Ranomasimbe Pasifika dia any andrefana, ny Ranomasimbe Atlantika any atsinana ary ny Ranomasimbe Arktika dia any avaratra.
Ny velarantanin'i Amerika Avaratra dia 23,75 tapitrisa kilometatra toradroa; i Kanada no firenena ngeza indrindra raha araka ny velarantany, dia avy eo arahan' i Etazonia (9,63 tapitrisa km²) sy i Meksika (1,97 tapitrisa km²). Ny isan'ny mponiny dia 443,36 tapitrisa; i Etazonia no be mponina indrindra (301 tapitrisa, manana hakitroka 31 mponina isaky ny km²) arahan'i Meksika (107 tapitrisa) sy i Kanada (31 tapitrisa).
Ny tanàna ngeza indrindra ao Amerika Avaratra dia i Mexico (Meksika), i New York (Etazonia), i Los Angeles (Etazonia) ary i Chicago (Etazonia).
Ny fiteny miasa ao dia ny fiteny anglisy any Kanada sy any Etazonia, ny fiteny espaniola any Meksika sy any Atsimon'i Etazonia ary ny fiteny frantsay ao Québec, any atsinanan'i Kanada.
Ny andry dia teny ampiasaina hampitohizana ny lazaina amin'ny entimilaza tsy matoanteny. Maro ireo fiteny mampiasa andry ka isan'izany ny fiteny frantsay sy ny fiteny anglisy. Ireo fiteny ireo dia mampiasa matoanteny andry ( être ao amin'ny fiteny frantsay fa be kosa ao amin'ny fiteny anglisy). Tsy ny fiteny rehetra no ahitana teny misahana anjara asa andry ary misy ireo izay tsy mampiasa azy raha tsy amin'ny lafin-javatra sasany ihany. Tsy voatery ho matoanteny ny andry ao amin'ny fiteny iray.
Botswana na Repoblikan'i Botsoana (AAI : [bot͡sˈwana] izay azo soratana Bôtsoàna ihany koa) dia firenena iray ao atsimon'i Afrika. Ny anaran'ilay firenena dia avy amin'ny foko lehibe monina ao Botsoana. Ny firenena manodidina azy dia Afrika Atsimo, Namibia, Zambia ary Zimbaboe.
Tamin'i Botsoana mbola protektorata britanika, Bechuanaland no anarany. Ny anarany ankehitriny dia navadika ho ofisialy tamin'ny taona 1966. Ny toe-kareny izay miankina amin'ny toe-karen'i Afrika Atsimo, dia anjakan'ny fiompiana omby ary ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany. Ny renivohiny dia Gaborone ary ny teny ofisialiny dia ny fiteny anglisy ary ny fiteny tsoana
Ny Kaonektiktioty, na Connecticut (amin'ny fiteny anglisy [kəˈnɛtɪkət]), dia faritany mizaka tena any Inglatera Vao, any avaratra atsinanan' Etazonia, Ny isam-poniny dia misy 3,5 tapitrisa mahery. Ny renivohiny dia Hartford, ary ny tanàna ngeza indrindra dia Bridgeport. Any atsinanan'i New York, ny kaonektikioty dia faritany manan-karena, voalohany any Etazonia ho an'ny karamam-ponina, ary ambony hakitroka amin'ny 270 mpo./km².
Ny anarana « Connecticut » dia avy amin'ny fiteny mohegan Quinnehtukqut midika « isian'ny renirano be » na « amoron-drenirano ».
Ny Costa Rica na Repoblikan'i Costa Rica, dia firenen' Amerika Latina voafaritry ny Nicaragua any Avaratra, ny Panama any Atsimo atsinanana, ny Ranomasimbe Pasifika any Andrefana asy ny ranomasina Karahiba any atsinanana. Ny Costa Rica no firenena voalohany nanala ny tafiny. Ny renivohiny dia San José. Fiteny Espaniola ny teny ofisialy ary fiteny anglisy no fiteny faharoa ampiasaina any Costa Rica. Ny vola ampiasaina any dia ny colón.
Ny Firenena Mikambana (FM) dia fikambanana iraisam-pirenena lehibe.
Ao amin'ny firenena mikambana ny firenena rehetra (afatsy ny firenena sy faritany tsy manam-pahaleovantena sasany) eto an-tany. Misaraka amin'ny firenena mpikambana, ny tanjony dia mitazona ny fandriampahalemana manerana ny tany. Ny tanjony dia manamora ny fiaraha-miasa amin'ny lafin'ny zo iraisam-pirenena, ny fiarovana iraisam-pirenena, ny fivoarana ara-toe-karena, ny fivoarana ara-tsôsialy, ary ny Zon' olombelona. Ny FM dia voaforona tamin'ny 1945 mba hanolo ny Fikambanan'ny firenena (SDN) tsy nanao ny asany noho ny Ady Lehibe Faharoa.
Tamin'ny 2008, firenena 192 no mpikamban'ny FM, saika ny firenena rehetra fantatra eto an-tany. Avy eo amin'ny sezany eo amina tany iraisam-pirenen'ny tanànan'ny New York any Etazonia. Ny FM sy ny masoivoho manokana anaty firenena hafa.
Ny FM dia manana teny ofisialy enina : ny fiteny arabo, ny fiteny sinoa (mandarina) ny fiteny anglisy, ny fiteny frantsay, ny fiteny rosiana ary ny fiteny espaniola.
Ny fiteny dia fomba fampitana ny fampahalalana. Ny dikan'ny fiteny amin'ny fiteny malagasy dia "teny iombonan'ny antokon' olona iray", ny dikany hafa koa dia "zavatra azo tenenina" na "fomba na baiko atao fifandraisana". Ny dika hodinihana ato dia ny dikany volaohany: "teny iombonan'ny antokon' olona iray".
Ny fahefana mampiasa ny fiteny dia nanomboka tamin'ny taona talohanny Tantara. Tahaka ny vondrom-piteny niasa tamin'ny Olombelona nanomboka nanoratra.
Nandritra ny taona môderna, nihabetsaka ny isan'ny foteny foronina. Ny fiteny foronina dia teny mbola tsy nisy taloha, fa noforonin'ny olona iray na olona maro; ny teny foronina dia ilaina sarahana amin'ny teny natioraly; ny fiteny foronina malaza indrindra manerana ny tany dia ny fiteny esperanto. Ny fiteny dia heverina fa fomba fifandraisana manokana ho an'ny olombelona, na dia manana fomba fifandraisana sarotra azo aza ny biby, lazaina hoe fitenin'ny biby.
Ny teny hoe fiteny dia voapetraka anaty dika maro. Ny fiseho hita indrindra dia ny teny tenenina toy ny fiteny anglisy na ny fiteny sinoa tenenina. Na dia izany misy koa ny fiteny soratana ary fomba hafa fifandraisana tsy mila feo toy ny fiteny moana.
Ny matoanteny andry dia matoanteny ampiasaina hampitohizana ny lazaina amin'ny entimilaza tsy matoanteny. Maro ireo fiteny mampiasa matoanteny andry ka isan'izany ny fiteny frantsay sy ny fiteny anglisy. Ny fiteny frantsay dia mampiasa indrindra ny matoanteny être fa ny fiteny anglisy kosa dia mampiasa ny matoanteny be. Tsy afangaro amin'ny anjara asa mpanampy ny anjara asa andry. Ny fiteny rehetra no manana matoanteny andry ary misy ireo izay tsy mampiasa azy raha tsy amin'ny lafin-javatra sasany ara-pitsipiteny ihany. Ny fiteny rosiana dia tsy mampiasa matoanteny andry amin'ny fehezanteny amin'ny filazam-potoana ankehitriny sy amin'ny endri-pehezanteny manambara.
Ny mpisolo mampifandray dia mpisolo afaka mampiditra fehezankevitra vaovao miakina. Sady mpisolo izy no mitovy lenta amin'ny mpampiankina fehezankevitra. Ny fiteny malagasy, ohatra, dia tsy ahitana mpisolo mampifadray maro ka ny tena fantatra dia ny hoe izay fa ny hafa dia mety iadian-kevitra. Ny fiteny frantsay dia manana ny hoe qui, que, dont sns. Ny fiteny anglisy ahitana ny hoe who, that, sns.
Valesa Atsimo Vaovao (amin'ny fiteny anglisy : New South Wales izay afohezina hoe NSW) dia faritany mizaka-tena ao Atsinanan'i Aostralia. Ny faritany manodidona azy dia Queensland, Victoria, ary Aostralia Atsimo. Ny renivohi-paritany dia Sydney izay tanàna be mponina indrindra ao amin'ilay faritany ary ao Aostalia. Ny isam-ponina dia 7,23 tapitrisa mponina izay 34,5%-n'ny isam-ponin'i Aostralia.